James Swan” Doorasho ka dhacda Soomaaliya waxaa caqabad ku ah khilaafka Dowladda Dhexe iyo Dowlad Gobolleedyada | Burconews
Swan ayaa sheegay si loo gaaro doorasho ” Qof iyo Cod ah” in ay khasab ku tahay Dowladda Dhexe iyo Dowlad Gobolleedyada xubnaha ka ah in ay deg deg u soo afjaraan khilaafka dhaxdooda ah.
“Horumar laga sameeyo Ajendaha iyo himilada doorasho ee 2020 wuxuu u baahnaan doonaa isafgarad siyaasadeed. Tani waxay horseedi doontaa wadahadal iyo isu tanaasul u dhexeeya Dowladda Dhexe iyo Dowladaha xubnaha ka ah federaalka”ayuu yiri James Swan.
“Kadib in kabadan hal sano oo aan laheyn iskaashi wax ku ool ah oo u dhaxeeya Dowlada Dhexe iyo Dowladaha xubinta ka ah Federaalka, xaaladdani waxay caqabad ku noqotey hagaajinta iyo gaarista waxyaabaha mudnaanta u leh qaranka. Hoggaamiyaasha Soomaaliya waa inay si deg deg ah wax uga qabtaan si loo kala lasoo afjaro ismari waaga udhaxeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadda”ayuu hadalkiisa kusii daray James Swan.
Laakiin dhinaca kale marka la eego James Swan ayaa imaanay hormarrada kale oo dowladdu ku talaabsatay, sida dhinacyada, Amaanka, Kobaca Dhaqaalaha iyadoo meel wanaagsan uu marayo qorshaha Deynta Cafinta Soomaaliya oo ay dowladda ka wada shaqeynayaan hadda hay’addo caalami ah.